डब्लुएचओले भन्यो, ‘कोरोना नयाँ भेरियन्टको जोखिम छैन’ – Patrika Nepal
डब्लुएचओले भन्यो, ‘कोरोना नयाँ भेरियन्टको जोखिम छैन’
पुष २२, २०७८ बिहिबार 27
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले फ्रान्समा देखिएको कोभिडको भेरियन्टको जोखिम नभएको जनाएको छ ।
सो भेरियन्ट नोभेम्बरमा नै देखिएको भन्दै यसको जोखिम नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
‘फ्रान्समा भेटिएको नयाँ भेरियन्ट हाम्रो राडरमा छ । यसको अन्यको तुलनामा बढी जोखिम छैन,’ डब्लूएचओका अब्दिल महमुदले भने । फ्रान्समा फेला परेको भनिएको भाइरसलाई आइएचयु नाम दिइएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : विजय गच्छदारलाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी
पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरू ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति छन्। सिंहका अनुसार तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायत छन्।
‘तीन सय बढीको हकमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न हामी लागिरहेका छौं,’ सिंहले भने। तर, ब्युरोले‘हाइप्रोफाइल’ लाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाने तयारी गरेको बुझिएको छ।
‘पक्राउ पूर्जी जारी भएकालाई सकेसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदनसँगै अदालतमा पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले थुनामा छन्। बाँकी कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्।
पक्राउ पूर्जी जारी भएकामध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातविरूद्ध भ्रष्टाचार गरी कालोधन आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उनीसँगै छोरा कमल बस्नेत, ज्वाईँद्वय प्रज्जवल अधिकारी र मनोज सुवेदी अनुसन्धानमा छन्। ती सबैको नाममा गएको सम्पत्तिको मूल्यांकन भइरहेको छ। तर, अनुसन्धानमा रहेकाले बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकमा ऋण तिरेको देखिन्छ। बस्न्यातले आर्जन गरेको सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने यकिन गर्न विभागका अधिकारीहरू लागिपरेका छन्।
बस्न्यातका परिवारले ठूलो रकम बैंकहरू कर्जा निकालिरहने गरेको देखिएको छ। ‘एउटा बैंकबाट निकालेको कर्जा अर्को बैंकबाट तिर्ने गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यति ठूलो रकम कर्जा किन निकालिन्छ भन्ने पाटो शंकास्पद छ।’
ललिता निवास प्रकरणमा तानिएपछि बस्न्यातविरूद्ध अख्तियारले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि विभागले लेखी पठाएको थियो। लोकमानसिंह कार्की बर्खास्तमा परेपछि बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका थिए।
Prevयी ४ राशिका व्यक्तिको हुन्छ लव म्यारीज, जान्नुहोस् तपाईको किस्मतमा के ?
Nextमस्तिष्कका लागी अत्यन्तै खराब छन् यी ५ प्रकारका खाना, कतै तपाईले त खानुभएको छैन ?
ठूला मान्छेहरू सरसर्ती भित्र छिरे, बिरामी छु भन्दै हात जोड्दा पनि जान पा’इँन !
बिदेश गएका बुद्ध दाइ र बसन्ति दिदिको डरलाग्दो झ गडा ( हेर्नुस् भिडियो )